दिल्लीमा प्रधानसेनापतिले भेटे रक्षामन्त्री र सुरक्षा सल्लाहकार, के भए कुरा ? - Everest Dainik - News from Nepal
दिल्लीमा प्रधानसेनापतिले भेटे रक्षामन्त्री र सुरक्षा सल्लाहकार, के भए कुरा ?
नयाँदिल्ली, जेठ २५ । भारतका रक्षामन्त्री निर्मला सितारमणले नेपाली सेनालाई सहयोग थप बढाउने वचन दिएकी छन् ।
बिहीवार दिल्लीस्थित आफ्नो कार्यालयमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई स्वागत गर्दै उनले दुई सेनाबिचको सुदृढ सम्बन्धप्रति खुशी व्यक्त गरेकी छन् ।
‘नेपाली सेनासंग भारतीय सेनाको सम्बन्ध संसारकै उत्कृष्ट छ । यो सम्बन्ध थप सुदृढ गर्दै आपसी हितमा अघि बढनु पर्छ , भारत सहयोगका लागि प्रतिबद्ध छ’, रक्षामन्त्रीलाई उदृत गर्दै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो ।
दुई पक्षबीच छिट्टै संयुक्त परामर्श समितिको बैठक बसेर आपसी मुद्दामा छलफल हुने पनि रक्षामन्त्री सिथारमणको भनाइ थियो ।
याे पनि पढ्नुस मोदीलाई ठूलो झट्का, बीजेपीका वरिष्ठ नेता सिन्हाद्वारा पार्टी परित्याग
प्रधानसेनापति क्षत्रीले बिहीबार नै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल, रक्षा सचिब सन्जय मित्र, सेनाध्यक्ष बिपिन रावत, जल सेनाका अधिकारीसङ्ग बेग्लाबेग्लै भेट गतेका थिए । प्राधानसेनापती ६ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भारतमा छन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Army Chief Kshetri, India, Indian Defense Minister Nirmala